SwiftChat inokukunceda uchonge iindwendwe ezifanelekileyo ngokukhawuleza ngengxoxo ephilayo kwaye ubakhokelele ekuthengeni. Ingxoxo ebukhoma kwi-ecommerce ingaba ngama-400% angabizi ngaphezu kwenkxaso yefowuni, inokunyusa ukuguqulwa ama-3 ukuya kuma-5 amaxesha, ukunciphisa izinga lokulahla iinqwelo, ukwandisa ukwaneliseka kwabathengi, ukwandisa ukunyaniseka kwabathengi, kunye nokuphucula imveliso yabasebenzi bakho.
Juni 24, 2021 ngo-4: 57 AM
Imithombo yeendaba yeNtengiso ye-ecommerce sisixhobo esinamandla kakhulu. Ikuvumela ukuba unxibelelane nomzi mveliso wakho, abathengi, kunye nentengiso ngendlela yobuqu, yoluntu. Unokusebenzisa imithombo yeendaba ekuhlaleni ukwenza ukubandakanyeka kunye nokunxibelelana, ukonyusa ukugcwala kwiwebhusayithi yakho, kunye nokuphuhlisa isiseko esikhulu sabathengi. Ukugcina ithoni eqinileyo kunye nobuntu benkampani yakho kwimidiya yoluntu kubaluleke kakhulu kuba ukungaguquguquki kuko kuya kudala ukuthembela kubaphulaphuli bakho.